तपाईंको यो साता (चैत ३ देखि ९ गतेसम्मको राशिफल) – SawalNepal
तपाईंको यो साता (चैत ३ देखि ९ गतेसम्मको राशिफल)
२०७५ चैत्र १, शुक्रबार १९:३७ मा प्रकासित
मेष – पारिवारीक झमेला निम्तिनेछ । अध्ययनमा सफलता मिल्ने एवम आम्दानीको योग राम्रो देखिन्छ । व्यवसायमा फाइदा एवं सांगीतिक क्षेत्रबाट प्रशंसा मिल्नेछ । यात्रामा खर्च, वादविवादमा वृद्धि एवं घुँडा गोडाको समस्या आउन सक्नेछ । साताको अन्त्यमा भने स्वास्थ्यमा सुधार देखिन्छ ।
वृष – उत्साह थपिनेछ । चोटपटकको समस्या दोहोरिनेछ । बोलीले काम बिग्रिने एवं पारिवारिक तनाव रहनेछ । साताको मध्यमा स्वास्थ्यमा बाधा आउनेछ । अन्त्यमा भने अध्ययनमा प्रगति एवं राजनीतिक लाभ मिल्नेछ ।
मिथुन – धनको कारोबार बढ्नेछ । बोलीले प्रभाव पार्नेछ । जिम्मेवारी थपिने एवम पारिवारीक स्वास्थ्यमा भने समस्या आउनेछ । जग्गा जमिनबाट फाइदा मिल्नेछ । मिष्ठान्न भोजनको योग एवं सन्तानबाट सुख रहनेछ ।
कर्कट– यात्राको योग बन्नेछ । मनमा प्रशन्नता आउनेछ । धनको सहयोग बढ्ने एवम दाजुभाईबाट फाइदा मिल्नेछ । नोकरीमा प्रगति देखिन्छ । प्रमी प्रेमिकाबीच सम्बन्ध बढ्नेछ । अध्ययनमा भने कमजोरी एवं खर्चमा भने वृद्धि हुनेछ ।
सिंह– यात्रामा सास्ती मिल्नेछ । खर्चले तनाव गराउनेछ । आत्मप्रशंसा बढ्ने एवम राजनीतिक फाइदा मिल्नेछ । साताको मध्यमा अध्ययनमा प्रगति एवम काममा फाइदा मिल्नेछ । अन्त्यमा भने सम्पति प्राप्ति एवं भोजनको सुख मिल्नेछ ।
कन्या– आम्दानीले साथ दिनेछ । सोचेको कुरा पूरा हुनेछ । पेटको समस्या एवं जीवनसाथीसँग मनमुटाव रहनेछ । सवारी सुख प्राप्ति एवम मनोरञ्जनमा खर्च हुनेछ । वैदेशिक काममा फाइदा एवं रोजगारीमा अवसर मिल्नेछ ।
तुला– प्रशंसा मिल्नेछ । आम्दानी बढ्नेछ । जग्गाजमिनबाट फाइदा एवं बौद्धिक क्षमताले प्रशंसा मिल्नेछ । व्यापारमा फाइदा एवम अरुबाट सहयोग मिल्नेछ । हातमा समस्या आउन सक्नेछ । साताको अन्त्यमा भने स्वास्थ्यमा बाधा, खर्चमा वृद्धि एवम मानसिक चोट पुग्नेछ ।
वृश्चिक– धर्ममा रुचि जानेछ । राजनीतिक लाभ मिल्नेछ । सञ्चित धन बढ्ने एवं घरायसी कारोबारबाट फाइदा मिल्नेछ । पेटको समस्या एवम सन्तानको स्वास्थ्यमा बाधा आउनेछ । शत्रुसँग विजय एवं आम्दानीले राम्रो साथ दिनेछ ।
धनु – मनमा भय उत्पन्न हुनेछ । चिसोले बाधा उत्पन्न गर्नेछ । धार्मिक यात्रा एवं अधुरा कार्य पूरा हुनेछ । शरीरमा विसञ्चो एवम मनमा अशान्ति रहनेछ । स्त्री पक्षबाट फाइदा एवम भेटघाटमा रमाइनेछ । साताको अन्त्यमा भने राजनीतिक लाभ र प्रशंसा मिल्नेछ ।
मकर – यात्राको योग एवम साझेदारीबाट फाइदा मिल्नेछ । मनोरञ्जनमा खर्च हुने, पारिवारीक भेटघाट हुने अवसर मिल्नेछ । साताको मध्यमा भने अचानक बाधा, आलोचनाको भय एवं अपमानित हुनुपर्नेछ । सांगीतिक क्षेत्रबाट भने प्रशंसा मिल्ने तर अनावश्यक खर्च बढ्नेछ । सवारी साधनबाट भए एवं लामो यात्राको योग बन्नेछ ।
कुम्भ – विपक्षीसँग मेलमिलाप हुनेछ । स्वास्थ्यमा सुधार एवम राम्रो काममा लगानी हुनेछ । दाजुभाईबाट सहयोग बढ्नेछ । सन्तानको चिन्ता थपिने एवम व्यवसायिक रुपमा झमेला आउनेछ । साताको अन्त्यमा भने नोकरीमा तनाव एवम धनको कारोबारमा विवाद आउनेछ ।
मीन – अध्ययनमा रुचि जानेछ । आम्दानी राम्रो हुनेछ । स्वास्थ्यमा भने समस्या, शीर दर्द देखिन्छ । पाचनशक्तिमा गडबडी देखिएको छ । भूमिबाट फाइदा एवम राजनीतिक लाभ मिल्नेछ । मुद्दामामिला किनारा लाग्ने एवं ईष्टमित्रबाट सहयोग पाइनेछ ।
बिहानै पाथीभरा माताको दर्शन गरि हेर्नुहोस राशि अनुसार तपाईंको भाग्य: ०७६ साल ज्येष्ठ ०७ गते मंगलबार
बिहानै पाथिभरा माताको दर्शन गरि हेर्नुहोस तपाइको राशि अनुसारको भाग्य: वि.सं. २०७६ साल जेठ ६ गते,सोमबार
बिहानै पाथिभरामाताको दर्शन गर्दै हेर्नुहोस आजको राशिफल: वि.सं.२०७६ साल ज्येष्ठ ०५ गते
हेर्नुहोस राशि अनुसार तपाईंको भाग्य: वि.सं.२०७६ साल ज्येष्ठ ०५ गते
तपाईंको यो साता (जेठ ५ देखि ११ सम्मको राशिफल)
कस्तो छ तपाइको यो साता ? राशिफल हेरेर बनाउनुस् योजना